Wax qabadkii Masaajidka waa la arkay ee Mee kii Skuulku?
Shiikh Cabdiraxmaan M. Jibriil
Ummad walba nolosheedu waxay ka soo jeedaa dhaqankeeda. Sida ay unnoolyihiin iyo waxa ay qiimeeyaan waxay ka yimaadaan dhaqanka ummadaas.
Arrin mawduucaas xiriir la leh oo Soomaali qusaysa ayaan halkaan ku fiirinaynaa. Masaajidka & Madrisada Quraanku waa shay xiriir qoto dheer lalah dhaqanka Soomaaliyeed. Skuulka iyo Cilmiga lagu barto waxay ahaayeen shay uu gumaysigu keenay isla markaasna u dhiibay dawladii Soomaaliyeed.
In kasta oo mudadii dawladu jirtay ay jireen skuulo iyo jaamacado ay kharashkooda bixiso dawladu haddana ma aysan noqon shay muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed, sida Madrisada Quraanka iyo Masaajidku uga mid yihiin dhaqanka Soomaaliyeed.
Taasi waxay keentay, markii dawladii la waayay ama ay baaba�day in skuulkii iyo waxii lagu baran jiray labaduba baaba�aan. Madrisadii iyo Masaajidkii iyo wixii lagu baran jirayna ay sii kordhaan. Waa shay ka mid ah ummada. Inta ummadaas qof ka joogo waa jirayaan.
Kuma xirna xoolo, nabad iyo wax kale midna. Waa caqiido dhaqan iyo diin u noqotay ummada. Ma aha shay loo keenay oo ajnabi ah.
U fiirso sirtaas. Skuulka waa loo baahanyahay. Cilmiga waa loo baahan yahay. Caalamkaan waxaa lagu wadaa laguna noolyahay cilmi iyo wax barasho skuul. Cid ka maaranta ama wax u badala haysata ma jirto. Laakiin Soomaali sidaas ma aha. Skuulku waa ajnabi. Marna kama midnoqon dhaqanka ummada ee wuxuu ahaa marti la joogta.
Madrisada iyo Masaajidku waxay noqdeen qayb wayn oo ummada dhaqankeeda iyo caqiidadeeda ka mid ah. Sidaas daraadeed ummada ayaa ka mas�uul ah. Dadka ayaa wadaya, dhisaya, maal galinaya. Umana baahna dawlad iyo lacag dawladeed ama mucaawano cidkale laga helo. Qof kasta gaarkiisa ayuu mas�uul uga yahay. Rag iyo dumar yar iyo wayn qof walba xil ayaa ka saran sidii uu u hirgalin lahaa Masaajidka iyo Madrisada.
Al-xamdu-lillaah. Waan ku liibaanay ilaalinta iyo xifdinta Masaajidka iyo Madrisada. Markii aan dawlad waynay, daryeel waynay, cilmi skuul iyo caqli nakala celiya waynay, waxaan u baxsanay Diintanadii iyo dhaqankanagii.
Wax kale oo dhan, kulay kutahay shir nabadeed, waxaa loo baahan yahay dawlado maal galiya iyo lacag lagu wado, taas oo laga sugayo dawlado kale oo dangaar ah wata. Wali Masaajid iyo Madriso mucaawano looma doonin ee dadka ayaa Alle ajri uga raadsada.
Qofkasta oo Muslim ah waa isku mid. Haddii masaajidka qof Soomaali ah dhiso iyo haddii qof Carab ah dhiso waa isku mid. Waxay ka simanyihiin Alle ayay ajri uga rabaan oo iyaga ayaa wax doon ah.
Soomaali ma taqaan mana ku baraarugin muhimada skuulka. Marna kama mid noqon dhaqankooda ee wuxuu ahaa wax loo keenay oo ay ku qaateen shaki iyo taxadar. Xattaa ardayda skuulka dhiganaysa uma dhiganayn inay intifaacsadaan ama Alle ajri uga helaan, ama uu yahay wax muhiim ah oo aan laga maarmin ee waxay u dhiganayeen inay buuxiyaan shuruuda la iska rabo marka shaqo loo baahdo, ama ay imtixaanka ka jawaabaan.
Kadib markii dawlad lawaayay, waxaa soo baxay ardaydii madrisada iyo Masaajidka oo wax wayn qabtay. Tacliin, shaqo, ganacsi, wax farid iyo wax reebid, ka shaqayn nabadeed iyo wixii la mid ah.
Xattaa waxay isku dayeen inay buuxiyaan kaalinta bannaan ee dawlada oo ay qabtaan dalka oo dhan. Isku dayo badan oo ay ugu danbaysay kii maxaakimta ayay sameeyeen.
Quwada ajnabi oo aan Soomaali u naxayn dana kala hayn ayaa u diiday inay dalkooda xukumaan ama ka taliyaa. Haddii Soomaali oo dhan jahliga iyo aqoon yarida ka simantahay, wadaadadu marwalba waxay dheeraayeen wanaag doon iyo wax islaaxin.
Yaa-kale oo markiiba soo celin lahaa boolidii lakala boobay 17 sano ka hor. Yaa kale oo markiiba amniga xaqiijin lahaa. Yaa kale oo markiiba furi lahaa dakada iyo garoonka Muqdisho. Yaa kale oo sifayn lahaa dagaal ooga yaashii Soomaaliya. Ka sokow dag-dag iyo farsama xumo, mar walba wanaag doon ayay ahaa yeen.
Su�aashu waxaa weeye ardaydii skuulku meeye. Cilmigii iyo caqligii lacagta badan iyo wakhtiga lagu bixiyay meeye. Kaalinta raga skuulku xageebay aaday wakhtigii loo baahnaa oo wax walba qasmeen?
Cilmiga iyo garshada dheer ee caqliga ku dheehan ee dadka skuulku leeyihiin ama ku faanaan maxay qiimo leeyihiin marka lagu fiiriyo waxay u qabteen dalkooda iyo dadkooda. Kaliya waxay sugayaan in dawladi timaado oo ay la soo baxaan warqadihii skuulka markaasna la siiyo shaqo mushaar badan ama ay ka turjumaan qof ajnabi ah oo ay luqadiisa yaqaanaan.
Muhimada casharkaan waa laba shay:
Ummad waxaa wax u tara wax ay rumaysantahay oo dhaqankeeda ka mid ah oo ay iyadu daryeesho oo xil iska saarto, sida Soomaali xil isaga saartay Masaajidka iyo Madrisada quraanka.
Qiimaha iyo wax qabadka qofku ma aha waxa uu yaqaan iyo inta uu cilmi leeyahay ee waa iimaanka iyo quwada xammaasada ee uu u hayo arrin ama mabda.
Cilmiga iyo dawladnimadu ma noqonayaan wax ka hirgala Soomaaliya ilaa ay Soomaaliyi fahamto muhimada ay u leeyihiin arrimahaasi oo ay ka mid noqoto dhaqan kooda isla markaasna ay iyagu daryeelaan.
Dawladnimada iyo qaabka dawladeed ee la isku xukumo ummadaha kale waxay u yihiin wax muhim ah oo ka mid ah dhaqankooda iyo noloshooda mana heli karaa qaab nololeed oo kale. Sidaas daraadeed daacad ayay u yihiin dawlada iyo nidaamka dawladnimo. Waana taas mida kamaqan Soomaali.
Waxaan u baahanahay oo aynaan marna ka maarmin inay dhaqankeena hakamid noqoto Dawladnimada iyo wax barashadu, sida Masaajidka iyo Madrisadu uga mid yihiin.